Kedu ihe bụ Direct to Consumer (D2C)? | ECommerce ozi ọma
Kedu ihe bụ Direct to Consumer (D2C)?
Ddị D2C na-enye ndị ụdị ohere ịmepụta ezigbo mmekọrịta na ndị na-azụ ha. Site n'ire ndị ahịa gị, ị nwere ike ịgwa ha akụkọ gbasara aha gị. Na omenala, ọ bụrụ na ahọpụtara ngwaahịa gị karịa ndị asọmpi na weebụsaịtị onye na-ere ahịa, ị nwere ike merie ire ere ahụ, mana ị wulitere mmekọrịta gị na onye ahịa ahụ?
N’akụkọ ihe mere eme, eresịla ndị na-ere ahịa ụlọ ahịa ma ọ bụ ndị na-emechitere ndị ahịa ahịa mmekọrịta ha na ndị ahịa ha. Nke ahụ pụtara data dị oke ọnụ ahịa n'ịzụ ahịa na ọ bụrụgodi, a na-ezonahụ ụdị mmadụ.
Site na email nke ndị ahịa ma ọ bụ adreesị anụ ahụ, akara ahụ nwere ike inye ahụmịhe ahịa dị n'otu. Ndị ahịa na-atụ anya ahụmịhe ka mma karịa ka ha nweworo na akụkọ ihe mere eme.
1 Na na Onye Ahịa
2 Akara ụghalaahịa
3 Njikwa ihe onwunwe
4 Ree ngwaahịa
5 Ahịa ndị ahịa
Na na Onye Ahịa
Mgbe ị na-erere onye na-ere ahịa ma ọ bụ onye na-ere ahịa, ị nweghị ike ịchịkwa ihe na-eme n'etiti ha na onye ahịa ahụ. Otu n'ime akụkụ kachasị sie ike nke ika bụ ịmepụta ngwaahịa ndị na-ege gị ntị ga-ahụ n'anya ma zụta. Ọ bụrụ na ịnweghị nkwukọrịta okwu nke gị na onye ahịa gị, kedụ etu ị ga - esi nwee ike ịmalite ngwaahịa ọhụrụ?
Ndị a bụ ihe atọ ị ga-atụle tupu ịmalite ire na ntanetị ma ọ bụ n'ahịa:
1) Meewanye ụgwọ ndị na-ere ahịa
Mgbe ị naghị achịkwa ire ahịa gị, enwere ụgwọ na ụgwọ ị na-enweghị ike ịhọrọ ma ọ bụ leghara anya. Arefọdụ na-ezo, ụfọdụ nwoghara, ụfọdụ bụ ụgwọ, ebe ndị ọzọ na-ekpughere mgbe azụmahịa na-eru imecha. Mgbe ịmalitere ichikota ụgwọ niile, ụgwọ na ebubo nke ikpo okwu e-commerce nwere ike ịgba, ị ga-achọpụta na ha bara oke oke akụkụ ahịa gị. Ọ bụrụ na ị gbakwunye mbupu na mmezu, ị na-achọ ihe zuru oke iji tụlee ihe ọzọ.
2) Njikwa nke ọtụtụ ọwa ahịa
O yikarịrị ka ị na-ere site na ọtụtụ ọwa dị ka nyiwe ecommerce, ebe nrụọrụ weebụ gị, ndị na-ere ahịa, ma ọ bụ brik na ụlọ ahịa. Ijikwa ahịa n'ofe ọwa dị iche iche nwere ike ịbụ ihe ịma aka dị ka nke ọ bụla na-abịa dị iche iche achọrọ ma nwee ike itinye nsogbu na akụrụngwa n'ihe gbasara oge, usoro ego, ngwaahịa, nhazi, ma ọ bụ mbupu. Ownghara inwe usoro azụmahịa nwekwara nsogbu ya, ebe njehie ọ bụla ma ọ bụ ihe ịma aka ọ bụla nwere na ọwa ndị ọzọ nwere ike imetụta akara aha na afọ ojuju ndị ahịa. Site na mpụga, ọ nwere ike ịpụta na ụlọ ọrụ nwere alaeze dị ike nke na-ere ngwaahịa ha; otu o sila dị, ụzọ ọtụtụ ọwa nwekwara ike itughari akara na ụzọ o si eso ndị ahịa eme ihe.
3) Asọmpi ahụ ọ dị nso nke ọma?
Ọnụnọ na nnukwu nyiwe ma ọ bụ ahịa ga-apụta ịre ndị ọzọ aka n'akụkụ, nke nwere ike inyere njirimara nke ngwaahịa aka karịa ndị ọzọ, mana ọ nwekwara ike bụrụ ihe egwu ma ọ bụrụ na a na-ere ụdị dị ala ma ọ bụ dochie ya na weebụsaịtị. Ekwesiri ịtụle ihe ndọghachi azụ a ma ọ bụrụ na ngwaahịa gị enweghị ike ịpụta ngwa ngwa, ebe ndị ahịa bụ otu ịpị aka na nhọrọ ọzọ.
O nwere ike iyi ka ọ na-eri oge ma na-ewe akụ, mana ịnwe ụlọ ahịa ịntanetị gị bụ atụmatụ dị ogologo oge iji guzobe njirimara nke dijitalụ nke gị na ịntanetị na-agbasawanye. Inwe ebe nrụọrụ weebụ n'ịntanetị abụghị ihe ntinye ma ọ bụ windo na-echekwa na ụlọ ahịa dijitalụ gị, ọ bụ ụzọ iji wepụta akara gị niile site na iji ihe eji emepụta, ahụmịhe onye ọrụ, mmekọrịta ndị ahịa yana njikọta iji mee ka ọnụnọ azụmahịa gị dịkwuo elu. na-uru nke mmekọrịta na-eji ọkụ nwere na gị ika. N'ụzọ bụ isi, D2C na - enyere akara aka ijikwa akara aka ya, mezie mmekọrịta ya na ndị ahịa, ma jigide nnwere onwe dị ukwuu n'etiti ndị ọgbọ ya na ịntanetị.
Re site na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị na-enyekwa ikike nchịkwa n'akụkụ mpaghara gị site na iwepu. Enweela mgbanwe dị egwu n'ụzọ ụfọdụ ụdị si abịakwute ndị ahịa ha. Kama iji ndị na-ere ahịa ma ọ bụ ndị na-ere ahịa ahịa, ụdị ndị na-aga ahịa ozugbo na-ere ndị ahịa ikpeazụ.
Ngbanwe ike a na-akpata bụ ihe na-agbawa obi maka ndị na-ere ahịa ọdịnala, mana n'otu oge a mụrụ ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ ọhụụ na nke gara nke ọma n'afọ iri gara aga site na otu a. Ọ dị mkpa ka ị ghọta ihe kpatara ụlọ ọrụ ji aga ndị na-azụ ahịa ka ahịa gị wee nwee ike iwulite akara ngosi na-aga nke ọma.
Oge agafeela mgbe ụlọ ọrụ nnukwu ụlọ ahịa na-echekwa ngwongwo ngwongwo (CPG) na ụlọ ahịa ngalaba na-achịkwa ahịa ahụ, na-elekwasị anya na njikwa ọkọnọ na uru nke ịbụ ndị mbụ na-abịa.
Omenala CPG nke narị afọ gara aga - nke dabere na ọchụchọ maka nrụpụta ọrụ n'etiti ndị na-ebu ngwaahịa, onye nrụpụta, onye na-ere ahịa ahịa, onye na-ere ahịa na onye na - ekesa - nke na-etinye okpueze ụlọ ọrụ dịka Nike, Pepsi-Cola, Unilever na P&G, o pere mpe ma nwekwaa mkpa. Usoro ahịa ahụ adịchaghị ọnụ, na-adabereghị na ndị ọzọ, na-elekwasị anya na ahịa na-eme ka ọ dịkwuo mma na ndị ahịa ikpeazụ.
Dochie ọkọlọtọ ochie bụ ihe ọkụkụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-abawanye ma dị mkpa bụ ndị kwadebere nke ọma iji nwee ọganiihu na ahịa ndị ahịa nke 2019, ahịa na-azụ ahịa data.
Brandsdị ndị na-azụ ahịa, nke a na-akpọkarị D2C ma ọ bụ DTC, achụpụla echiche ochie nke ụlọ akwụkwọ na ịdabere na nkesa ndị ọzọ.
Na nkenke, ụdị D2C pụtara na dịka azụmaahịa, ị na-eresị ndị ahịa gị ngwaahịa gị ozugbo, na ka ị na-aga, ịga n'ihu na-emezi ahụmịhe ndị ahịa, na-emezi olu nke akara gị, ma ị na-achịkwa ihe niile gbasara njem ndị ahịa. ...
Ndị na-ere ahịa na-eleghara ụkpụrụ ọdịnala ahụ anya. Companieslọ ọrụ ndị ahụ kpebiri iwepụ onye etiti, ndị na-ere ahịa na ndị na-ekesa ya ma jiri ike igwe ojii na ịrị elu nke e-commerce ree ngwaahịa ha ozugbo iji kwụsị ndị ahịa.
Ọ bụrụ n’ị chee ụdị ngwaahịa ọhụrụ, mepụta ya, wuo websaịtị, wee mee ka ndị mmadụ zụta ya, ị nwere ike, n’ime ihe dị ka ọnwa ole na ole, chee ụdị ngwa ahịa ọhụrụ, wepụta ngwa ahịa, chịkwaa akụkọ ihe mere eme, wee wuo akara Ndepụta D2C nde dollar site na ncha.
Businesseslọ ahịa na-azụ ahịa na-enwe ọtụtụ (ma ọ bụrụ na ọ bụghị ha niile) n'ime njirimara asatọ a:
Ha bụ ndị mbido nke ụlọ ọrụ na-enweghị ihe mgbochi na-abanye.
Ha na-agbanwe n'ihe gbasara isi obodo na / ma ọ bụ nwee ike ịgbazite ma gbazite akụkụ nke arụmọrụ ahụ.
Ha nwere oke mmụọ maka ndị ahịa ha.
Ha nwere ihe ntinye data ntinye na nyocha.
Ha na-ewepu ndị na-emechi ọnụ iji nwee ike izipu ndị ahịa.
Ha ghọtara mkpa ọ dị iso ndị na-azụ ahịa na-ekwurịta okwu (na-eji sọftụwia CRM).
Ha nwere mgbanwe mgbanwe onu ahia karia nke ndi ahia ahia.
Ha gosiputara otutu ojiji nke ahia dijitalụ (karia email na mgbasa ozi).
DNVB bụ ụlọ ọrụ nwere nnukwu elekwasị anya na ahịa ndị ahịa ọ na-eje ozi na njem ndị ahịa n'ịntanetị, ma nwee ọtụtụ akụkụ nke nkesa. Ojiji nke ire ere na-enyere ndị ahịa ndị a aka ịmalite mmekọrịta na ndị ahịa wee nye ha ngwaahịa na ọrụ ndị ahịa na-atụ anya ya, nke n'ikpeazụ pụtakwara ahụmịhe ka mma. N'adịghị ka ndị na-ere ahịa ọdịnala ma ọ bụ ndị na-ere ahịa e-commerce, a mụrụ DNVB n'ime afọ dijitalụ, na-emesi ahụmịhe onye ọrụ ike, na-agbagha ahụmịhe ịzụ ahịa a na-ahụkarị, na ịmepụta ọdịnaya na-akpali akpali dị ka akụkụ dị mkpa nke olulu ahịa ya.
Kpochapu onye etiti
Mgbe ị na-ekpochapụ azụmaahịa dị iche iche dị n'etiti gị na onye ahịa gị, ị ga-ewepụkwa ụlọ ọrụ ndị na-ewere ụfọdụ uru gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na azụmahịa gị na-ere T-shirts, ma ịchọrọ ịre ngwaahịa ndị ahụ site n'aka ọtụtụ ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa, ị ga-ere ha na ọnụ ala dị ala nke na ha ga-aha ya ọzọ wee resị ya ndị ahịa. Nke ahụ na-eri oke oke gị, nke bụ uru gị bara uru maka ọnụ ahịa ngwaahịa gị, gosipụtara dị ka pasent. Ndụ nke onye ahịa ọ bụla ga - adị ntakịrị karịa ka ị ga - akwụ ụgwọ iji wepụta ngwaahịa gị n'ụwa.
Ka mma jikọọ na onye ahịa gị
Mgbe ị dabere na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ndị nkesa, na ndị na-ere ahịa iji ree ngwaahịa gị, ị na-efu ọtụtụ data nke nwere ike ịba uru maka akara gị. N'ezie, data ndị ahịa aghọwo otu n'ime akụ kachasị mkpa maka ụdị ala dijitalụ.
Ka anyị kwuo na ị ka na-ere t-uwe ndị ahụ site n'aka onye na-ere ahịa. Naanị ozi ị nwere ike ịnweta site na ngalaba ụlọ ahịa ebe a na-ere t-shirts gị dabere na ngwongwo: ire ere, olu weghachite, na ọchịchọ n'ọdịnihu. Nke ahụ nwere ike ịdị mma maka njikwa ngwa ahịa, mana ọ naghị agwa gị ọtụtụ ihe gbasara ndị ahịa gị.
Ka anyị kwuo na ị na-ere otu uwe elu ahụ site na weebụsaịtị gị. Have nwere ohere iji chee ndị ahịa gị nke ọ bụla na ngwaahịa ndị ọzọ na ndenye ọpụpụ (ire ere na mbugharị) iji gwa ngwaahịa ndị nwere ike ịga nke ọma na uwe elu ha dị ugbu a.
Have nwere ohere ịnwale ọnụahịa gị iji chọpụta ma ị nwere ohere ịkwụ ụgwọ ọzọ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ike ree karịa uwe elu ma ọ bụrụ na ị belata ọnụahịa. Nwere ike zigara ndị ahịa gị nyocha ndị na-eso ụzọ iji chọpụta ma ọ bụrụ na ha nwere mmasị na uwe elu ahụ, ma ọ bụrụ na ewepụtara ihe ahụ n'oge, yana ọ bụrụ na ọ zutere atụmanya ha.
Ọ bụrụ n ’uwe elu ahụ laghachitere, ị nwere ọtụtụ usoro ịkagbu nke nwere ike inyere gị aka ịchọpụta ihe mejọrọ, yabụ ị nwere ike ịnye ndị ahịa gị ngwaahịa ka mma n’ọdịnihu ma mepụta ahụmịhe ka mma. Na n’ikpeazụ, ị nwere mgbanwe izipu ozi ịntanetị na-ajụ ndị ahịa ajụjụ gbasara agba dị iche iche, nha na ụdị t-shirts iji nyere gị aka duzie gị site na mmepe ngwaahịa.
Expmụbawanye mindshare ngwa ngwa
Na usoro ire ọdịnala, ọ bụrụ na ịchọrọ ka t-shirts gị bụrụ akara mba, ma ọ bụ akara mba ụwa, ị ga-egosi ndị na-ere ahịa ihe atụ na ngwa ahịa gị nwere ike ịkwaga.
Ọ ga-ewe afọ ole na ole iji gosipụta na ị hibewo mpaghara ma ọ bụ mpaghara mpaghara, mgbe ahụ ị ga-ahụ ndị nkesa mba. Enwere ike ikwu otu ihe maka ọnụnọ mba ụwa - gosipụta ihe ịga nke ọma, chọta mmekọrịta ọhụrụ, ma gbasaa - itucha ma megharịa. Ọ nwere ike were ọtụtụ afọ (ọbụlagodi ọtụtụ iri afọ) ịmalite ịmalite ịtụkwasị ndị ahịa gị obi.
Na ụdị D2C, ị nwere ike belata oge gị n'ahịa n'ihi na ị na-egbutu ndị etiti niile ekwuru n'elu. Ozugbo ịmalitere weebụsaịtị gị ma ngwaahịa gị dị, ị nwere ike ịre ya na ebe ọ bụla (ọ bụrụhaala na ị nwere ikike mbupu).
Ruo ọtụtụ afọ, Gillete chịrị ahịa maka agụba ụmụ nwoke, mana na mwepụta nke Dollar Shave Club na 2011 na Harry na 2013, ụlọ ọrụ ọtụtụ ijeri dollar agbanweela. E kwuru na Gillete nwere ihe dị ka 70% nke ahịa ahịa na 2010, ma taa, ọ dị nso na 50%. Nke ahụ bụ ike ịgbasa njikọ aka nke uche na ikpo okwu dijitalụ.
Ejikwa gị ika akụkọ
Mgbe ịbugara uwe elu ndị ahụ na onye nkesa nke ndị ọzọ, ma ọ bụ bido ịrịọ ndị na-ere ahịa ka ha ree ha maka gị, ị na-enyefe njikwa nke akara gị. O nwere ike ọ gaghị adị ka oge ahụ, mana nke nta nke nta, ị na-etinye njikwa ahịa n'aka ụlọ ọrụ ọzọ.
Atọ n'ime Ps nke ahịa - ọnụahịa, nkwalite na ntinye - nọ na njikwa gị ma ọ bụrụ na ị nwere akara ahịa ndị ahịa.
Can nwere ike ịnwale ọnụahịa A / B, ị nwere ike ịbawanye, belata ma ọ bụ mee ihe ọ bụla ịchọrọ site na ọnụahịa gị dabere na akụnụba nke ụlọ ọrụ gị (na-eme ihe na-arụ ọrụ maka ndị na-ere ahịa ma ọ bụ ihe nkesa).
Can nwere ike ị na-enye n'ọkwá dabere na gị onwe gị ahịa data na ịchịkwa ahịa eruba site na iji a dịgasị iche iche nke ahịa si eme. Na, a na-emepe ma na-ere ngwaahịa na weebụsaịtị gị, yabụ na ịmara ebe a na-etinye ya, otu esi enye ya ndị ahịa ya, yana otu esi achọpụta (olile anya).
Nọ ebe niile, oge niile
Mgbe ngwaahịa gị gafere usoro inyefe ọdịnala, ị na-atụkwasị obi nke ukwuu na ntanetị ole na ole iji ree ngwaahịa gị. Oge ụfọdụ nke ahụ pụtara nkwekọrịta nkwekọrịta na mmachi ọnụahịa pere mpe. Ka anyị kwuo na ị na-ere t-uwe elu gị site na ire ere, ịchọrọ ịnye ọrịre ngwa ngwa.
O yikarịrị ka ị ga-emeli ihe ị nwere ike ime. Ma ọ bụ gịnị ma ọ bụrụ na ịchọrọ beta nwalee ngwaahịa ọhụrụ ma nweta nzaghachi sitere n'aka ndị ahịa gị ozugbo? Ohere inweta bu ire ahia ahu adighi acho ire obere ihe ohuru ha.
Bụ D2C pụtara na ị nwere ike ijikwa ngwaahịa gị site na usoro mgbasa ozi "ịkwanye ma ọ bụ dọpụta" gị. Ndị a gụnyere ebe nrụọrụ weebụ gị yana site na ọwa dị iche iche ebe ị na-ere. Nwere ike iji ọ bụghị naanị na ebe nrụọrụ weebụ gị, kamakwa ọwa ntanetị, mgbasa ozi email, na ndị ọzọ.
Imirikiti ụdị D2C na-eji ụfọdụ ụdị sọftụwia CRM ma ọ bụ ikpo okwu iji nweta ogo 360 maka ndị ahịa ha (yana ndị ahịa nwere ike) yana iji kpọtụrụ ndị ahịa ha (oge ụfọdụ) kwa ụbọchị.
Mkpakọrịta na ndị ahịa bụ naanị pịa, ma ọ nweghị ihe ga - egbochi gị ịgwa ha okwu, ma ọ bụ maka ire ere ma ọ bụ maka ọrụ ndị ahịa. Ndị ahịa ugbu a na-atụ anya ime ihe ozugbo mgbe ha nwere nsogbu, ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịzaghachi ya ozugbo, ọ kwesịrị ịmepụta ahụmịhe ndị ahịa ka mma. (Ọbụna ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ahụ maka ihe nketa na-atụtụ na nke a. N'afọ gara aga naanị, enwere m nsogbu abụọ na otu ụlọ ọrụ ego ma dozie esemokwu ahụ ọ bụghị site na ọwa nkwado ndị ahịa ọdịnala, kama site na Twitter. Ọsọ ọsọ).
Bụ ụlọ ọrụ D2C apụtaghị na ị dijitalụ, ọ pụtaghị na ị bụ onye na-ere ahịa ọtụtụ ọwa (na-ere na ọtụtụ ọwa dijitalụ). Ọ pụtara na ị nwekwara ike ịbụ onye na-ere ahịa omnichannel, na-erite uru ọwa ahịa ahịa dijitalụ na isi okwu anụ ahụ. O nwere ike ọ gaghị adị ka oge ahụ, mana nke nta nke nta, ị na-achịkwa njikwa ahịa a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » Kedu ihe bụ Direct to Consumer (D2C)?
Atụmatụ iji rube isi n'iwu ọhụrụ nke ịbanye na ọrụ